Ividiyo: Ukuqonda iTwitter | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 12, 2008 NgoLwesibini, Matshi 11, 2008 Douglas Karr
Ndabhala malunga I-Twitter okwangoku ibuyile, kodwa le vidiyo iyibeka kakuhle. Ndilandele apha http://www.twitter.com/douglaskarr.
tags: ukuvavanywa kwendawo
I-Twitter sisiKhangeli seNjini yam eNtsha
Mar 12, 2008 ngo 4:22 PM
Ividiyo ayisasebenzi. 🙁
Ngapha koko, ngesihloko se-microblogging: Ndizamile iinkonzo ezimbalwa ezinje nge-Twitter kunye ne-tumblr, andifumananga ndinomdla kakhulu ngazo. Mhlawumbi ndim kuphela, ndinobunzima obaneleyo bokuza nezinto kwibhlog yam egcweleyo kakhulu ukupapasha into ngeyure nganye okanye nge-microblog.
Mar 12, 2008 ngo 4:49 PM
Kubonakala ngathi ibuyile ngoku, andiqinisekanga ngokwenzekileyo.
Ukubhloga okuncinci yi-gig enzima, ngakumbi kubafana abafana nam abasebenza ukuze baphile. Andinaxesha lokwenza izinto phantsi imini yonke. Ndicinga ngayo njengeyona 'ndaba itikiweyo'. Ndibona ulwazi oluninzi xa ndijonga sifile imini yonke.
Andinaxesha lokubamba iincoko apho - kodwa uninzi lwezinto ezilungileyo ziyahamba. KUNYE nokundinceda ndicinge ngezimvo zezithuba ezizayo.
Mar 13, 2008 ngo-10: 06 AM
Ndifumene ibhlog yakho ngezimvo ozishiyileyo kwiNtengiso ye-Buzz. Ndiyazithanda iividiyo zoBuchule boBugcisa obuqhelekileyo - bayayaphula itekhnoloji entsha yindlela ekulula ukuyiqonda kwaye iyandinceda ukuyicacisa kubahlobo nakwabasebenza nabo. Enkosi ngokuthumela le malunga ne-twitter- I-twitter kodwa ngoku ndiyaqonda ukuba KUTHENI ndiyi-twitter!